Wadahadalkii Rooble & Farmaajo oo natiijo la’aan lagu kala tagay. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Wadahadalkii Rooble & Farmaajo oo natiijo la’aan lagu kala tagay.
Wadahadalkii Rooble & Farmaajo oo natiijo la’aan lagu kala tagay.
Wadahadalkii saacadaha socday una dhaxeeyay Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo & Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kusoo idlaaday Natiijo la’aan.
Ilo ku dhaw kulanka Rooble iyo Farmaajo ayaa Mustaqbal u sheegay in dhowr shuruud oo ay is hordhigeen ay adkaatay in laga gudbo waxaana kamid ah magacaabista Agaasimaha NISA, Kiiska Ikraan Tahliil & qodobo kale.
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo & Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sidoo kale isku qabtay awoodda maamulka Amniga.
Farmaajo ayaa Rooble u sheegay in amniga loo kala qaado mid guud & kan Doorashada, ammaanka guud uu Madaxweynaha mas’uul ka yahay, halka Doorashada iyo sugidda nabadgalyadeeda laga rabo Wasiirka Koowaad ee XFS.
Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada Koofur Galbeed & Galmudug oo sabab u ah isu keenidda Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday & Ra’iisul Wasaaraha XFS ayaa markale isku dayay in ay is hor fadhiisiyaan Farmaajo iyo Rooble si looga gudbo caqabadaha taagan.
Previous articleBush: “Mareykanka waxa uu wajihi karaa weeraro ka halis badan 11-kii September”.
Next articleRooble oo joojiyay Isticmaalka Lacagta Qoondada IMF ee Dowlada SDRs.